Saddex qof oo kale oo qaba COVID-19 ayaa ku dhintay Iowa, waxaana jiray 298 kale oo dheeri ah oo la | KWIT
Saddex qof oo kale oo qaba COVID-19 ayaa ku dhintay Iowa, waxaana jiray 298 kale oo dheeri ah oo la xaqiijiyay, gobolka ayaa sheegay maanta. Marka loo eego websaydhka 'coronavirus' ee gobolka, Iowa wuxuu soo sheegay 28,735 xaaladood oo ah coronavirus-ga cusub. COVID-19 kiis oo ka dhacay Iowa ayaa hoos u sii dhacayay ilaa bilowgii May. Laakiin waxa ay galeen labadii isbuuc ee lasoo dhaafay iyadoo ugu yaraan nus iyo toban degmo ay arkeen xaalado cusub. Gobolka Woodbury wuxuu leeyahay 14 kiis oo cusub oo ah Covid 19 maanta, guud ahaan 3,147 kiis, iyo 43 dhimasho ah. Degmada Dickinson waxay lahayd labo kiis oo dheeri ah wadarta guud ee 238 ilaa maanta iyo laba dhimasho oo cusub. Nebraska waxaa ku soo kordhay 375 kiis oo cusub 19 xaaladood ilaa iyo habeenka Jimcaha. Saraakiisha caafimaadka ayaa sheegaya in tirada kiisaska cudurka Coronavirus ee gobolka laga soo sheegayo ay gaarayaan 19,000, sida laga soo xigtay the track the internet coronavirus the Nebraska. In kabadan laba-meelood labo meel kiisaska coronavirus ee laga soo sheegey Nebraska waxay ku yaalliin shan degmo: Douglas, Dakota, Lancaster, Hall iyo Sarpy. Mid kasta oo ka mid ah wuxuu soo sheegay in ka badan 1,000 kiis. Waaxda Caafimaadka ee Degmada Dakota waxay xaqiijisay 14 kiis oo cusub, iyo hal dhimasho oo cusub, oo wadarta guud ka dhigaysa 35. South Dakota waxay qaadday 6,686 xaaladood iyo 91 dhimasho. Wadarta kiisaska waxaa ka mid ah 121 gobolka Union County. Xaaladaha la xaqiijiyey ee coronavirus waxay sii wadeen inay sii fuulayaan gobollada ku yaal jaamacadaha ugu waaweyn ee Iowa, sida lagu sheegay tirakoobyada la sii daayay Isniintii. Xogta caafimaadka dadweynaha ee gobolka ayaa muujisay Johnson County, oo ah hooyga Jaamacadda Iowa, in ay leedahay 1,096 xaaladood oo la ogsoon yahay illaa Isniinta, oo ah 38% kordhay usbuucii. Tirada kiisasku waxay bilaabeen qiyaastii Juun 15, iyada oo 40 ilaa 50 cusub oo la xaqiijiyey ay yihiin kiisas fiican maalmaha ugu badan. Magaalada Story County, oo ay ku taal jaamacadda Iowa State University, kiisaska la ogsoon yahay waxay gaarayaan 677, 44% ayaa kordhay tan iyo bishii Juun 22. Degmooyinka Johnson iyo Story ayaa ka mid ahaa 136 degmo oo Aqalka Cad lagu soo daray liiska usbuucii la soo dhaafay oo muujinaya gobollada leh tirada kiisaska oo sii kordheysa.